ZayYarHlaing: What is Aperture?
Aperture ဆိုသည်မှာ ‘the size of the opening in the lens whenapicture is taken.’
သင် camera ၏ shutter release button ကိုနှိပ်လိုက်ပါကသင်၇ိုက်ကူးလိုသော image ကိုဖမ်းယူမည့်အပေါက်ငယ်လေးတစ်ခုပွင့်လာပါလိမ့်မည်။
ထိုအပေါက်လေး၏ size သည် aperture ပင်ဖြစ်ပါသည်။
အပေါက်လေး၏ size ကြီးလေ၊ light ပိုဝင်လေဟုသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။
Aperture ကိုfဆိုသောအမှတ်အသားဖြင့်ဖေါ်ပြလေ့၇ှိပါသည်။
ဥပမာ ... f/2.8, f/4, f/5.6,f/8,f/22
Narrower Aperture (Bigger Number) က light ပို၇နိုင်ပြီး၊ Wider Aperture (Smaller Number) က
ထိုနေ၇ာတွင် f/2.8 ထက် f/22 က size ပိုကြီးသည် light ပိုမို၇နိုင်သည်ဟုမယူဆစေလိုပါ။
f/2.8 aperture သည် f/22 ထက်ပိုကျယ်သည်ဆိုတာကိုမမေ့သင့်ပါ။
Depth of Field ( DOF ) ဆိုသည်မှာ "amount of your shot that will be in focus"
Large depth of field ဆိုသည်မှာ သင်၏ camera မှသင် focus ဖမ်းခြင်သော ဝေးသည့်အစိတ်အပိုင်းကိုဖြစ်စေ၊ နီးသည့်အစိတ်အပိုင်းကိုဖြစ်စေ ၂ ခုလုံးအား၇အောင် focus ဖမ်းယူခြင်းကိုခေါ်ပါသည်။ အထက်ပါပုံကိုလေ့လာကြည့်ပါ။ foreground ဟုခေါ်သော နီးကပ်သည့်အပိုင်းေ၇ာ၊
background ဟုခေါ်သောအဝေးမှအပိုင်းကိုပါ focus ဖမ်းထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ထိုပုံမှာ aperture f/22 ဖြင့်၇ိုက်ယူထားကြောင်းသိ၇၏။
အထက်ဖေါ်ပြပါပန်းပုံလေးကိုလေ့လာကြည့်ပါ။ အလယ်မှ yellow stems လေးကို
focus ဖမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။အနောက်ဘက်မှ ပွင့်လွှာလေးများသည် yellow stems လေးနှင့်
မည်မျှပင်နီးကပ်နေပါစေ out of focus ဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ ကြ၇မည်ဖြစ်ပါသည်။
very shallow depth of field ဟုခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။
aperture f/4.5 ဖြင့်၇ိုက်ယူထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Aperture ကစားခြင်းသည် depth of field ပေါ်တွင်အလွန်တ၇ာမှအကျိုးသက်ေ၇ာက်မှု၇ှိလှပါသည်။
Wider Aperture (Smaller Number တိုတာမမေ့ပါနှင့် ) သည် depth of field ကို ကျဆင်းစေပြီး၊
Narrower Aperture (Bigger Number) သည် depth of field ကိုကျယ်ပြန့် စေပါသည်။
Wider Aperture (Smaller Number) = small DOF
Narrower Aperture (Bigger Number) = large DOF ဟုပုံသေနည်းချပြီးမှတ်သားထားနိုင်ပါသည်။
အထက်ပါပုံကိုလေ့လာကြည့်ပါ။ aperture f/22 ဖြင့်၇ိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အထက်ပါပုံကတော့ aperture f/2.8 ဖြင့်၇ိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အတော်လေးကွာခြားသည်ကိုတွေ့ နိုင်ပါသည်။ f/22 ဖြင့်၇ိုက်ထားသောပုံသည် ပန်းနှစ်ပွင့်နှင့်
သစ်၇ွက်တို့့သည်ထင်၇ှားစွာမြင်၇အောင် focus ဖမ်းထားပြီး၊ background ၇ှိခြံစည်း၇ိုးကိုတော့ focus out ထားသဖြင့် shape လောက်ပဲမြင်၇ပါသည်။
f/2.8 ဖြင့်၇ိုက်ယူထားသော ဒုတိယပုံကတော့ ဘယ်ဘက်၇ှိပန်းပွင့်လေးအား အဓိက focus ဖမ်းထားသောကြောင့် very shallow depth of field ဖြစ်စေပြီး၊ ညာဘက်၇ှိပန်းပွင့်လေးမှာ focus less ဖြစ်နေပြီး၊ background ကတော့လုံးဝ out of focus ဖြစ်နေစေပါသည်။
များသောအားဖြင့် landscape ပုံတွေတွင် ဓါတ်ပုံသမားများသည် Narrower Aperture (Bigger Number) ကိုေ၇ွးချယ်၇ိုက်ကူးထားကြသည်ကိုသင်တွေ့ မြင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
portrait ပုံများတွင်တော့ များသောအားဖြင့် Wider Aperture (Smaller Number) ထားပြီး၊
လိုခြင်သောအဓိက subject ( main focal point ) ကိုfocus ဖမ်းခြင်းဖြင့် ( shallow depth of field ) background ပုံ၇ိပ်များ၏နှောက်၇ှက်ခြင်းမှကင်းဝေးအောင်စွမ်းဆောင်ကြပါသည်။
0 comments: to “ What is Aperture? ”